Hay’adaha garsoorka dalka oo ku dhawaaqay shaqo joojin kumeelgaar ah. – Geelle Magazine
Hay’adaha garsoorka dalka oo ku dhawaaqay shaqo joojin kumeelgaar ah.
caliahmed Posted On March 19, 2020
Hay’adaha Garsoorka dalka ayaa maanta oo taaiikhdu tahay 19/03/2020 waxaa ay ku dhawaaqeen in ay si ku meelgaar ah u hakinayaan dhammaan howlihii garsoorka si looga feejignaado cudurkan saf-marka ah ee corona.
Laga billaabo 21-ka bishan Maarso muddo 15 Cisho ah ayey ku dhawaaqeen in la hakin doono isu imaatinka dad weynaha. dacwadaha iyo xukunada ay ridaan Maxkamadaha dalka.
Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee dalka ayaa sheegay in laanta Garsoorka ay ka mid tahay hay’adaha marti-geliya dadka ugu badan ee dacwadaha loo kala qaado, iyada oo laga feejignaanayo cudurka faafa ee corona shaqooyinka la hakiyey.
Waxa uu Guddoomiyaha faray dhammaan Garsooreyaasha dalka in ay hakiyaan dhammaan dacwadaha mudeysan iyo qabashada dacwadaha cusub iyo racfaanada laga qaato xukunada ay fuliyaan Maxkamadaha dalka.
Tallaabadan ayaa kusoo beegmeysa xilli maalin kahor uu Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ku dhawaaqay in la xero dhammaan waxbarashada, lana hakiyo isu imaatanka dad weynaha, si looga hortago cudurka saf-marka ah ee corona.
“hadii aan rabno in aan ka hortagno cudurkan, waxaan caawa dadka Soomaaliyeed u sheegaynaa in la xero iskuulada iyo Jaamacadaha laga bilaabo maalinta beri ah, ayna xernaadaan muddo 15 maalmood ah”.
Laba Xubno oo ka tirsan Congress-ka Mareykanka oo laga helay caabuqa Corona.